Mmadụ ibu hormone (HGH): Ọ jiri ịka nká? - China Honghui Daily ngwa oru
Mmadụ ibu hormone (HGH): Ọ jiri ịka nká?
Uto hormone fuels nwata ibu ma na-enyere ịnọgide na-enwe anụ ahụ na akụkụ ná ndụ. Ọ na-emepụta site na agwa-sized pituitary gland - odude ke ukot nke ụbụrụ. Malite na n'etiti afọ, Otú ọ dị, pituitary gland nwayọọ nwayọọ na-ebelata ego nke ibu hormone ọ na-arụpụta.
Nke a eke slowdown ka triggered mmasị iji sịntetik mmadụ ibu hormone (HGH) dị ka a ụzọ stave ụfọdụ nke mgbanwe jikọrọ ịka nká, dị ka mgbada muscle na ọkpụkpụ uka.
Ọ bụrụ na ị na-na na-enwe obi abụọ, ihe ọma. E nwere obere ihe àmà na-egosi mmadụ ibu hormone ga-enyere ma ike na ndị okenye naputa-eto eto na vitality. N'eziokwu, ndị ọkachamara nwere ike ikwu megide iji HGH na-emeso ịka nká ma ọ bụ afọ metụtara ọnọdụ.
Ọ ụfọdụ ndị toro eto chọrọ mmadụ ibu hormone?
Ee. Eto, bụ ndị nwere ezi uto hormone erughi - bụghị tụrụ anya na iju ke ibu hormone n'ihi ịka nká - nwere ike kenyere sịntetik mmadụ ibu hormone ha dọkịta.
Uto hormone erughi nwere ike mere site na a benign akpụ na pituitary gland (pituitary adenoma). Ọ na-nwere ike mere site na ọgwụgwọ nke ihe adenoma na ịwa ahụ ma ọ bụ Radiotherapy.
N'ihi na ndị okenye bụ ndị na-a ibu hormone erughi, injections nke mmadụ ibu hormone nwere ike:
Dịkwuo mmega ikike
Mmụba ọkpụkpụ njupụta
Mmụba muscle uka
ọnụ ahụ abụba
Human ibu hormone na-mma na-emeso ndị okenye na AIDS- ma ọ bụ HIV metụtara muscle n'iyi ma.
Gịnị nwere ike mmadụ ibu hormone-eme maka ahụ ike na ndị okenye?
Studies nke ike na ndị okenye na-ewere mmadụ ibu hormone na-ejedebeghị. Ọ bụ ezie na ọ na-egosi na mmadụ ibu hormone pụrụ ịmụba muscle uka na ibelata ego nke ahu abụba ke ike okenye okenye, na-abawanye na muscle anaghị ịsụgharị n'ime ụba ike. Ọ bụ anya ma ọ bụrụ na mmadụ ibu hormone pụrụ inye ndị ọzọ uru na ike okenye.
Post oge: Jun-12-2018
Mmadụ ibu hormone (HGH): Ọ jiri ...
Uto hormone fuels nwata ibu ma na-enyere ịnọgide na-enwe anụ ahụ na akụkụ ná ndụ. Ọ na-emepụta site na agwa-sized pituitary gland - odude ke ukot nke ụbụrụ. Malite na n'etiti afọ, Otú ọ dị, t ...